I-Tencent Gaming Buddy Landa Windows 10 (Inguqulo Yamuva) - Ama-Softwares
Imidlalo yokudlala isihambile ngemuva kokwethulwa kwePUBG Mobile ye-Android. I-PUBG yenze ukugembula kwaba lula ukudlala kuma-smartphone akho ngokulungiswa okuphezulu nangejubane elisheshayo. Kepha ukudlala okuqhubekayo ku-smartphone yakho kungacasula amehlo akho futhi kuthobise nokubona kwakho, ngakho-ke udinga ukuthola eyakho PUBG ku-PC yakho ngokulanda kuqala iTencent Gaming Buddy yamawindi.
I-Tencent Gaming Buddy - Isingeniso
I-Tencent Gaming Buddy ingenye yama-emulators asetshenziswa kakhulu alayishwe ku-PC noma kuma-laptops okudlala imidlalo ye-Android. Ilandiwe kakhulu ukudlala i-PUBG.
Inikeza abadlali bamageyimu ukuzwa impilo emangazayo yokudlala esikrinini esikhulu, ikakhulukazi abathandi bePUBG. Ivumela abasebenzisi ukuthi badlale imidlalo ngokushelela ngezilungiselelo zokumisa eziningana. Ayenzelwe i-PUBG kuphela kodwa neminye imidlalo eminingana ye-Android.
Kungani Ukhetha iTencent Gaming Buddy?
I-Tencent Gaming Buddy ingelinye lama-emulators amahle kakhulu emhlabeni jikelele. Manje zigxile kakhulu kwi-PUBG njengoba bekungumdlalo ohola phambili, kepha zikuvumela ukuthi udlale eminye imidlalo eminingi ye-Android ongayidlala kumawindi.
I-Tencent Gaming Buddy ithandwa ngenxa yezici zayo, okuvelele, nokunikezwayo. Ngakho-ke isizathu sokuqala sokukhetha i-Tencent kumele kube ukuthi udinga i-emulator ukuze udlale umdlalo wakho owuthandayo, i-PUBG kumawindi. Ilingisa ubumnandi ngokugcwele.
Ungadlala imidlalo enezici ezifanayo ezinokulungiswa okuphezulu, ihluzo, imivuzo yansuku zonke kanye nokuxoxa ngezwi nabangani bakho kwi-PC njengoba ubukwenza konke ku-smartphone yakho. Imvamisa, amanye ama-emulators akuvumela ukuthi ulande imidlalo futhi udlale futhi, kepha banokulinganiselwa okuthile okufanele bakusebenzise.
Kepha iTencent Gaming Buddy ayinamkhawulo ekudlaleni i-Android Games ku-PC. Kuza nawo wonke amaphakheji. Umdlalo odlalwe lapha usesinqumweni esiphakeme kunokudlalwa ku-smartphone.
Uma siqhathanisa iTencent Gaming Buddy namanye ama-emulators, kunzima ukusebenzisa. Akubandakanyi noma yimaphi amakhono obuchwepheshe, ngakho-ke cishe wonke umuntu angakusebenzisa ngokushesha okukhulu. Ine-interface elula futhi ivumela abasebenzisi abanezilungiselelo zokumisa eziningi.
Ungenza ngokwezifiso isipiliyoni sakho sokudlala ngalesi simiso esihle kakhulu. Enye yezinto ezimnandi kakhulu eza neTencent Gaming Buddy ukuthi ilula kakhulu. Ukulanda nokufaka i-Tencent akuthinti nhlobo ukusebenza kwesistimu.
Ukunikezwa okumangazayo kweTencent Gaming Buddy:
I-Tencent Gaming Buddy inokunikezwa okuhle kakhulu ukuvumela abasebenzisi ukuthi babone ukugembula okuphelele kwi-PC yakho. Iyahlukahluka ngendlela yayo. Ezinye izipesheli zimi kanje.
Ikuvumela ukuthi urekhode igeyimu.
Iphinde inikeze ukusakaza; ungasakaza ukuqoshwa kwegeyimu yakho kwamanye amawebhusayithi amakhulu okusakaza.
Inesistimu yemephu ezenzakalelayo evumela ukuthi ube nokuhlangenwe nakho okuphelele kwemidlalo.
Ivumela ukushintsha phakathi kokuphrinta kwesikrini okuhlukile njenge-HD, i-HD ephelele, ne-Ultra HD.
Inesici sokukuvumela ukuthi udlale kusikrini esigcwele. Lokhu kusiza ukuzibandakanya kakhulu ku-Gameplay yakho.
Ikuvumela ukuthi uthokozele i-gameplay yakho ngazo zombili izilimi zesiNgisi nezesiShayina ngokukhululekile.
Yini eyenza kube okungcono kakhulu?
Yize kunama-emulators amaningi, iTencent Gaming Buddy ibalwa njengeyona ehamba phambili ngenxa yeminikelo yayo. Kumahhala, futhi kukuvumela ukuthi ulawule ngekhibhodi yakho negundane lakho, okuyinto enhle kakhulu ongayizwa. Into ehamba phambili ngalesi simisi ukuthi inikezela ukudlala umdlalo ngamandla amancane ngokukhululekile.
Kepha njengoba i-PC namalaptop kunamandla amakhulu kune-Smartphones, ungathola i-gameplay ethuthukisiwe futhi ejabulisayo ngokusebenza okuthuthukile kwemidwebo nokunye ukulawula.
Izinyathelo Zokulanda iTencent Gaming Buddy:
Ukulanda iTencent Gaming Buddy kulula kakhulu. Okulandelayo yizinyathelo ezimbalwa futhi ezilula:
Vula isiphequluli osisebenzisayo kuwe Windows 10.
Manje chofoza ku isixhumanisi ukulanda i-emulator.
Ngemuva kokuchofoza kusixhumanisi, ikhasi lewebhu lizovuleka lapho uzobona khona inketho yokuthi 'qala ukulanda.'
Chofoza kuleyo nketho bese ulinda ukulanda.
Enye into emnandi ngeTencent Gaming Buddy ukuthi iza ngephakeji lapho ukufakwa kohlelo kungadingi noma iyiphi isoftware eyengeziwe ukuyifaka nokuyiqhuba.
Kufanele uchofoze inketho yokufaka, bese okunye kuzenzakalelayo. Ngemuva kokuthi uhlelo selufakiwe kumawindi akho, unenketho yokwenza ubuhlakani bemidlalo yakho.
Ixhasa ngokugcwele izici zomdlalo ezifana nengxoxo yezwi, imivuzo yansuku zonke nezinye izinketho.
Ukunikezwa Gameplay uqobo.
Isekela izilawuli zekhibhodi nezamagundane.
Ukwenza imephu okuzenzakalelayo.
I-Tencent Gaming Buddy ingenye yezinto ezinhle kakhulu Ama-emulators adumile wokudlala imidlalo ye-Android ku-PC yakho futhi ujabulele ulwazi olunzulu noluthuthukisiwe lokudlala.
Igxila kakhulu kuPUBG ukudlala kumawindi, okuwumdlalo we-Android ne-IOS. I-PUBG ibingumdlalo we-smartphone ohamba phambili kakhulu selokhu yethulwa ngo-2018. Kepha iTencent Gaming Buddy ikuvumela ukuthi uzwe iPUBG neminye imidlalo ehlukahlukene ye-Android ongayidlala ezikrinini ezinkulu ze-PC yakho.
Izici eziningi zenza iTencent Gaming Buddy i-emulator engcono kakhulu ongayisebenzisa. Ivumela isipiliyoni sokudlala esingenamthungo. Usengakwazi ukufinyelela kuzo zonke izici zomdlalo obukade unazo kwi-smartphone yakho.
Ku-PUBG, ikuvumela ukuthi uxoxe ngezwi, uthole imivuzo yansuku zonke, futhi cishe zonke ezinye izinto ozibona ku-smartphone yakho ngenkathi udlala i-PUBG.
Ngokwengeziwe, ikuvumela ukuthi urekhode ukudlala kwakho umdlalo, okungasakazwa kwamanye amasayithi wokusakaza adumile. Kuluhlelo olulula olusebenza ngamandla amancane.
Sincoma ukuthi uye kuTencent Gaming Buddy ukuze ube nokuhlangenwe nakho okubushelelezi nokujabulisayo kuwe Windows 10 ngemidlalo oyithandayo kakhulu ye-Android.
Kuhle iOS Emulator for PC
Indiana Jones - Esikwaziyo Kuze kube manje
Ingakanani Ingqikithi KaRyan Seacrest?